सिटीको मेस्सीलाई अफरै अफर!के मेस्सी सिटी नै जालान त? | पहिलो बोली
५८३९ पटक पढिएको
Published on: Thursday September 3, 2020 (1 year ago)
विश्वकै उत्कृष्ट फुटबलर मध्येका एक लियोनेल मेस्सीले स्पेनिस क्लब बार्सिलोना छोड्ने हल्लाले शान्त हुने नाम लिइरहेको छैन । १३ बर्षको उमेर देखि क्याटलान क्लबमै रहेका मेस्सी हाल ३३ बर्ष भए पनि विश्वका धेरै क्लबले भित्र्याउन चाहने खेलाडी हुन् ।
इटालीको इन्टर मिलान र युभेन्टस, फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्माइन, इङ्ल्यान्डको म्यानचेस्टर युनाइटेड,म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सी त लाइनमा थिएन नै । हुदा–हुदा जर्मनीको स्टुटगार्टका समर्थकले मेस्सी भित्रउन ९ सय मिलियनको चन्दा उठाउन शुरु गरिसकेका छन् ।
विश्वकै ध्यान तान्न सफल भएको मेस्सीको ट्रान्स्फरका लागि कुनै पनि क्लबले उनलाई भित्राउन ७ सय मिलियनको रिलिज क्लज अनुसार पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर समर्थक र फुटबल विश्लेषकहरु भने त्यो क्लज र मेस्सीलाई पाल्न सक्ने एक मात्र क्लब म्यानचेस्टर सिटी नै भएको मान्छन् ।
हुन पनि सिटीले मेस्सीलाई भित्र्याउन चाहेको यो पहिलो पटक भने होइन । जब–जब बार्सिलोनासँग मेस्सीको खट्पट र सम्झौता सकिने समय हुन्छ, उनलाई मनाउन अघि सर्ने क्लब सिटी नै हुने गर्छ । झन अहिले त मेस्सी र बार्सिलोनाको सम्बन्ध चिसिएको कारणले पनि सिटीले मौकाको फाईदा उठाउने निश्चित छ ।
सिटीले बार्सिलोनाका स्टारलाई अहिलेको अवस्थामा यस्तो आकर्षक प्रस्ताव राखेको छ जसलाई मेस्सीले नाई भन्नै सक्दैनन् ।
सिटीको आकर्षक प्रस्तव मध्येको एक हो मेस्सीको तलब । मेस्सीले सिटीमा पाँच बर्ष बिताउने क्रममा हरेक हप्तामा ११ लाख डलर तलब खाने छन् । मेस्सीले खेले पनि नखेले पनि यो तलब उनले सधैं पाउने छन् । सिटीले दिने यो तलब उनले बार्सिलोनामा खाने भन्दा १ लाख डलर बढी हुने छ ।
यती मात्र होइन । मेस्सीले सिटीमा खेलेको तीन बर्ष परा भएपछि ३० करोड डलर बोनसको रुपमा पाउने छन् । यसको मतलब मेस्सीले सबै गरेर बर्षमा १ अर्ब २० करोड डलर कमाउने छन् ।
रिपोर्टका अनुसार मेस्सीले तीन बर्ष सिटीमा खेले पछी ३६ बर्षको उमेरमा सिटी फुटबल फाउन्डेसनले नै चलाउने अमेरिकी लिग एमएलएसको क्लब न्यु योर्क सिटी एफसीमा जान पाउने छन् । यदी मेस्सी सिटी आएको खण्डमा उनी प्रिमियर लिगमा सबै भन्दा धेरै कमाउने खेलाडी पनि बन्ने छन् ।
मेस्सीलाई अन्य थुप्रै क्लबले प्रस्ताव राखे पनि धेरै संचार मध्यमहरुले भने सिटीमा उनका पुर्व प्रशिक्षक र साथी पेप ग्वार्डियोलाका कारण जाने लगभग पक्का भएको रिपोर्ट सार्वजकि गर्दै आएका छन् । मेस्सी र बार्सिलोनाको खट्पट पनि धेरै बढेका कारण पनि सिटीको यस पटकको प्रयास भने खेर नजाने जस्तो देखिन्छ ।
मेस्सी बार्सिलोनाको प्रि–सिजनको अभ्यास सुरु भए पनि गएका छैनन् भने क्लबले सबै खेलाडीमा गराएको कोरोना परिक्षणमा पनि अनुपस्थित रहेका थिए । यसै कारण सबैको आँखा भने अब मेस्सीमा नै रहने छ ।
सामाजिक संजालमा पनि मेस्सी ट्रेन्डिङमा छन् । अहिलेको खेलकुदका समाचार नै हेर्ने हो भने मेस्सी मात्र देखिन्छन् । मेस्सीले क्लब छोड्नु कारण भने बार्सिलोनाको बोर्ड भएको सबैले अनुमान गरेका छन् ।
तर बार्सिलोना नजिक स्रोतले भने मेस्सीले क्लब छोड्नुमा पुर्व खेल निर्देशक एरिक अबिडालले पुर्व प्रशिक्षक अर्नेस्टो भालभर्डेलाई खेलाडीको दवावले निकालेको कुरा अन्तर्वातामा भने पछि उनी रुष्ट भएको बताएको छ । अझै नयाँ आएका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोमनले आफ्नो साथी लुइस स्वारेजलाई क्लबबाट निस्किन भने पछि मेस्सी झनै रुष्ट हुँदै क्लब छोड्ने कुरा अघि बडेको बार्सिलोना नजिक स्रोतले बताएको थियो ।
तर मेस्सीले बार्सिलोना छोड्ने हो र कुनै क्लबले उनलाई किन्ने हो भने त्यो क्लबलाई मैदान र मैदान बहिर दुवै तिर निकै फाईदा हुने देखिन्छ । तर के ३३ बर्षिय मेस्सीलाई यति ठुलो रकम बढी त हुने हैन ? के सिटीले बार्सिलोनाले मागे जती पैसा दिदा पर्ने आर्थिक भार थेग्न सक्ला ?
युभेन्टसले पनि रोनाल्डोलाई व्यवसायिक कारणले भित्र्याएको थियो । तर उनीहरु इटालियन सिरी आ लगातार जिते पनि च्याम्पियन्स लिगमा भने सघंर्ष गरिरहेका छन् । सिटीको पनि अवस्था हेर्ने हो भने उस्तै छ । तर के मेस्सीले आफ्नो घर बार्सिलोना छोड्दै सिटी नै जालान त? कि युरोप कै अन्य क्लब जालान ?त्यो त आउने समयले नै बताउला।
अमेरिकी डि.भी चिठ्ठाको नतिजा सार्वजनिक